China - Hong Kong Cross Border Trucking
Pearl River Delta Port Haulage
China Domestic Long Haulage
China Less Truck Load (LTL) Cargo Service
China - ASEAN Cross Border Trucking
China - Hong Kong Express
Import / Export & Custom Brokerage
Translate to Myanmar
YATFAI’s Expertise in Myanmar: Meeting your specific supply chain and logistics challenges
Emerging market like Myanmar continues to face supply chain and logistics challenges to shippers around law enforcement; infrastructure, social networks and personal contacts, YATFAI’s expertise in Myanmar plays an important role to cope with this situation.
We understand that every market has its own characteristics and priorities. Your customers have specific requirements that you need to meet to stay ahead of your competition.We have organized our business to meet the specific challenges of different industry sectors. Our Myanmar specialist teams apply their genuine expertise to provide the most appropriate solutions for your business and an open, honest, responsive approach, giving you fast access to senior decision makers.
As Myanmar economies grow, you may want to share in this dynamic and grow with it. Our teams are dedicated to customer-driven logistics or supply chain project integration. It is developed and structured around two fundamental commitments: being close to our customers and providing high-quality solutions.
Our Winning Methodology
Our commitments: Guarantee services, complying with guidelines, with needs and with the conditions of the supply chain contract.
Our methodological approach guarantees the quality of services,links to:
Clear definitions of roles and responsibilities
Systematic identification of potential returns and risks
Deployment of proprietary visibility tools
High-level local experience and expertise
Simple single requirement: Quality
Customer Project Driven Approach and Commitments
Proximity, an essential value
ထုတ်ဝေခြင်း အတွဲ (၁)
၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှု သင့်အတွက် လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံဖို့ အထူးသီးသန့်ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းမှုကွန်ယက်နှင့် ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်း စီမံဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းချိတ်ဆက်ပေးခြင်း မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ဈေးကွက်ပေါ်ထွန်းလာနေချိန် အစဉ် တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရမည့် ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းမှု ကွန်ယက်နှင့်စီမံဆောင်ရွက်မှု စိန်ခေါ်မှုများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အခြေခံဖြစ်သည့် မူဘောင်များနှင့် လူမှုရေးကွန်ယက်အတွင်း သင်္ဘောတင်လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အတွက် ၀င်းရက်ဖိုင်း မြန်မာမှ ကျွမ်းကျင်သူများက ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး ကွန်ယက်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရက်ဖိုင်း၏ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့် အရေးကြီးသည့် ခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်လျှက်ထိေ၇ာက်သော ၀န်ဆောင်မှု ပေးရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ယခုကဲ့သို့ သွက်လက်ပြီး တိုးတက်လာသည့် စီးပွားရေးတွင် ပါဝင်လိုချင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို၏အဖွဲ့သားများသည် ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းမှု ကွန်ယက်နှင့် ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းစီမံဆောင်ရွက်မှုတွင် လုပ်ငန်းရှင်များကို အဓိကထားပြီးဆောင်ရွက် ရာတွင် အချိန်ပေးနေသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံ ကတိက၀တ် (၂)ခုကို ဘောင်ချထားပြီး တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးစေရန် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး အရည်အသွေးမြင့်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးနေပါသည်။
ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်၏ လိုအပ်ချက်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်ကို အာမခံဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ ဈေးကွက်တိုင်းတွင် ၀ိသေသလက္ခဏာများနှင့် ဦးစားပေးမှုရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုရှေ့တွင် နေနိုင်ရန်လိုအပ်သော အထူးလိုအပ်ချက်များကို လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဖြည့်ဆည်း ပေးနေရသည်။ မတူကွဲပြားသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အထူးအသေးစိတ်တွေ့ရှိနေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းများကို ချမှတ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၇ှိသော အထူးကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများမှ သင်တို့၏လုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သော အကောင်းဆုံး
အောင်မြင်မှုရလာဒ်ကို စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုများကို အသုံးချလျက် ပွင့်လင်းရိုးသား သော တုန့်ပြန်မှုနှင့် ချဉ်းကပ်ပြီး သွက်လက်မြန်ဆန်စွာ ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့်သင့််တို. ၏လုပ်ငန်းဆိုင်၇ာ ဆုံးဖြတ်ပေးသူများမှ လွယ်ကူစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အောင်မြင်ခြင်း နည်းနိသယ
ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော အောက်ပါဝန်ဆောင်မှု အာမခံချက်များ :
သက်ဆိုင်သည့်အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းသည့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
ရနိုင်ဖွယ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဖွယ်ရာ စနစ်ကျသည့် ခွဲခြားသိမြင်မှုများ
တစ်ဦးတည်းတွေ့မြင်နိုင်သည့် ကိရိယာများဖြင့် အသုံးပြုခြင်း
ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီး အဆင့်မြင့်သောကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိခြင်း။းအတွေ့အကြုံရှိခြင်း။ အဆင့်မြင့်သောကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ
ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီး အဆင့်မြင့်သောကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိခြင်း။
လုပ်ငန်းရှင်များ၏ စီမံကိန်းအား ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန် ချဉ်းကပ်၍ ကတိက၀တ်ပြုခြင်းs
လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး အဓိကတန်ဖိုးပေးခြင်း
၀င်းရက်ဖိုင်း (မြန်မာလီမိတက်)သည် ၀င်းအုပ်စု(မြန်မာ)နှင့်ဟောင်ကောင်အခြေစိုက်ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်း စီမံဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ရက်ဖိုင်းအုပ်စုနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းဖြစ်၍ ၁၉၈၅ခုနှစ် မှ စပြီး အာရှ၊ ပစိဖိတ်၊ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိကတိုက်အထိ ဤအုပ်စုမှ သွားလာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိသည်။
Copyright	©	2019, YATFAI, All Rights Reserved